Global Voices teny Malagasy » Vehivavy Nomena Voninahitra Noho Ny Zavabitany Ho An’ny Fanatanjahantena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Novambra 2015 8:12 GMT 1	 · Mpanoratra Carlos Esteban Cana Nandika (en) i Lindsey Mulholland, avylavitra
Sokajy: Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Vaovao Tsara, Vehivavy sy Miralenta, Lalao Olaimpika
Avy ankavia miankavanana: Sara Rosario Vélez avy amin'ny Kaomity Olaimpika ao Puerto Rico, akaikin'i Stavroula Kozompoli (Eorope); Kereyn Smith, Sekretera Jeneralin'ny Kaomity Olaimpika ao New Zealand; Thomas Bach, filohan'ny Kaomity Olaimpika Iraisampirenena (IOC); Lydia Nsekera, filohan'ny Kaomisiona Iraisampirenen'ireo Vehivavin'ny Fanatanjahantena; Sheika Hayat Bint Adbulaziz Al Khalifa (Azia); ary Mervat Hassan (Afrika) nandritry ny lanonana fanolorana maripankasitrahana tao amin'ny Mozean'ny Olaimpika tao Lausanne, Soisa. Sary natolotry ny IOC, Christophe Moratal.
Vehivavy dimy avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo irao no notolorana ny Loka “Women in Sport Trophy”, izay atolotry ny Kaomity Olaimpika Iraisampirenena (IOC) ho fankasitrahana ireo olomalaza sy fikambanana izay nanampy nampivoatra sy nampiroborobo ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fanatanjahantena, anisan'izany ny resaka fitantanan-draharaha sy ny fitànana toeranà mpitarika.
Tamin'ity indray mitoraka ity, ny loka Olaimpika, izay efa hatramin'ny 2000 no natolotra ireo solontena avy amin'ny tanibe tsirairay avy, dia nomena an'i : Sara Rosario Vélez avy amin'ny Kaomity Olaimpika ao Puerto Rico (any Americas), ilay Ejiptiana mpanao gazety Mervat Hassan (Afrika), Sheikha Hayat Bin Abdulaziz Al Khalifa avy ao Bahrain (Azia), Stavroula Kozompoli (Gresy), ary ilay Aostraliana nahazo medaly Olaimpika, Cathy Freeman (Oseania). Ny Kaomity Olaimpika ao New Zealand, nahazo ny Loka Manerantany, dia i Kereyn Smith Sekretera Jeneraliny no nisolo tena azy.
Ilay hetsika, natao tamin'ny 10 Novambra tao amin'ny Mozea Olaimpika ao Lausanne, Soisa, dia nankalazàna ihany koa ny faha-roapolo taonan'ny Kaomisiona “Women in Sport” ao amin'ny IOC (Kaomisionan'ireo vehivavy misehatra amin'ny fanatanjahantena), izay naorina tamin'ny 1995, rehefa nanao ny Vovonana Fahaefatra Manerantany Ho An'ny Vehivavy  tany Beijing, Shina ny Firenena Mikambana. Ny Fanambaràn'i Beijing  dia nametraka tanjona lehibe maromaro sy fepetra ho fampiroboroboana ny vehivavy sy ny zon'ny vehivavy. Miaraka amin'io rafitra io, niaro mandrakariva ny hisian'ireo vehivavy ao amin'ny sehatry ny fanatanjahantena manerana izao tontolo izao efa ho nandritry ny roapolo taona ny Kaomity Olaimpika Iraisampirenena.
Thomas Bach, filohan'ny IOC, sy Lydia Nsekera, filohan'ny Kaomisiona ” Women in Sport”, dia samy naneho ny fahafahampòny tamin'ny fitomboan'ny fifandanjan'ny isan'ny lahy sy vavy amin'ireo Lalao Olaimpikan'ny Tanora 2018  hatao any Buenos Aires, izy hahitàna ny fandraisana anjara be indrindran'ireo vehivavy teo amin'ny tantaran'ny lalao.
Tao amin'ilay lanonana, samy nanindry ny tanjaka ananan'ny fanatanjahantena amin'ny andrisihana ny vehivavy ireo solontena tsirairay nahazo loka. Nomarihan'ny solontenan'i New Zealand, Kereyn Smith, fa 50 isantajo tamin'ireo medaly volamena azon'ny solontenan'i New Zealand tamin'ny Lalao Olaimpika dia vehivavy no nandrombaka azy. “Fantatray fa, amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena, azon'ny vehivavy atao ny manangana sy mampiseho fahaizamanao toy ny vitan'ireo mpitarika goavana ihany koa—niasa mafy izahay mba hanomezana tanjaka sy hampiroboroboana io rohy io.”
Sara Rosario miresaka amin'ireo mpanotrona tao anaty efitrano fanaovana fety “Pierre de Coubertin”, toerana nanaovana ny lanonana. Sary natolotry ny IOC, Christophe Moratal.
Sara Rosario, vehivavy voalohany voafidy ho filohan'ny Kaomity Olaimpika ao Puerto Rico  tamin'ny 2012, niteny tety anjorony ho an'ny mpanao gazety hoe:
Tena marina, asan'olona maro no mitambatra ato anatin'ity loka ity. Nisy asa betsaka niarahanay nanatontosa tamin'ireo fikambanana nasionaly, niaraka tamin'ireo filohanà federasiona isanisany avy, niaraka tamin'ireo atleta rehetra. Ireo vehivavy rehetra nandany ora maro ho an'ny fanatanjahantena amin'ny maha-atleta azy, maha-mpikarakara, tany anaty media, filohanà federasiona, mpitsara, [sy] amin'ny maha-mpampihatra fitsipika azy—amin'ny teny fohy dia hoe tamin'ny fomba marobe. Heveriko fa tokony ho antony iray hanome fahafahampo ho an'ny Porto Rikàna rehetra hoe (ny zavamisy dia) i Puerto Rico androany no notolorana ity loka ity izay misolo tena ny tanibe Amerika manontolo, eto Lausanne, tato anatin'ny 100 taona (izay nisian'ny Kaomity Olaimpika Iraisampirenena teto).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/22/76933/
 Kaomity Olaimpika Iraisampirenena : http://www.olympic.org/
 Vovonana Fahaefatra Manerantany Ho An'ny Vehivavy: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
 Fanambaràn'i Beijing: http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf
 Lalao Olaimpikan'ny Tanora 2018: http://www.olympic.org/buenos-aires-2018-youth-olympics
 Kaomity Olaimpika ao Puerto Rico: http://www.copur.pr/